““ရီဆိုက်ကယ် သမား ”” | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Arts & Humanities » ““ရီဆိုက်ကယ် သမား ””
““ရီဆိုက်ကယ် သမား ””
Posted by “ဘီလူးကြီး”ogre on Dec 15, 2011 in Arts & Humanities | 23 comments
မနက်ဆို စောစောထရတယ်ဗျ မနက် ခြောက်နာရီလောက်ထဲက ၀င်းထဲရောက်နေမှ
ဒါမှ ကိုယ့်ထက်ဦးတဲ့သူတွေ ကိုအမှီလိုက်နိုင်မှာလေ
အလုပ်အတွက်ကတော့ အများကြီးယူသွားစရာ မလိုပါဘူး ဆာလာအိတ်ကြီးကြီးတစ်လုံးဆိုရပြီ
ငွေလဲ အရင်းအနှီးမလိုပါဘူး အဓိက ကတော့ စောစောရောက်သွားဘို့ပါပဲ
အလုပ်ခန့်တဲ့သူလဲမရှိဘူး လစာပေးမဲသူလဲမရှိဘူး အလုပ်ထုတ်မဲ့သူလဲမရှိဘူးလေ
ဒီဝင်းကြီးက ကျုပ်တိုအတွက် စားဝတ်နေရေး ထောက်ပံပေးနေတဲ့ ၀င်းကြီးပေါ့
ဒီဝင်းကြီးထဲမှာ ရန်ကုန်မြို့ကနေ မြန်မာပြည်အထက်ပိုင်းခရီးသွားကြတဲ့ လူတွေရဲ့ ခရီစဉ်အစပြုရာနေရာကြီးလေ
ကျုပ်အလုပ်က သိပ်ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မဟုတ်ပါဘူး ခင်ဗျားတို့လို ခရီးသွားတွေ ထားပစ်ခဲ့တဲ့
ရေသန့်ဗူးခွံတို့ ဘီယာသံဗူးခွံတို့ ကျွဲရိုင်းအချိုရည်ဗူးခွံတို့ လိုက်ကောက်တဲ့သူလေ ဒါတွေကို မနက်ရောက်တာနဲ့
အဝေးပြေးဝင်း တစ်ပတ်ပြည်အောင် ဆာလာအိတ်လွယ်ပြီးလမ်းလျှောက် ဆိုင်တကာ့ဆိုင်ရဲ အ၀င်ပေါက်နားက
အမှိုက်ပုံးတွေဖွင့်ကြည့် ဆိုင်ရှေ့က ရေမြောင်းတွေထဲလဲရှာ လမ်းမပေါ်တွေ့လဲကောက်ပေါ့
ကျုပ်တို့မှာတစ်နေ့တစ်နေ့ လူတွေရဲ့ အမှိုက်စွန့်ပစ်နိုင်လောက်တဲ့ လူမြင်ကွင်းက အမှိုက်ပုံးတွေ
လူတွေ လစ်ရင်လစ်သလိုစွန့်ပစ်တတ်တဲ့ နောက်ဖေးလမ်းကြားတွေ လမ်းမပေါ်တွေ ရေမြောင်းပေါက်တွေ
သစ်ပင်ခြေရင်းတွေ ပန်းခြုံကြားထဲတွေ အိုနေရာစုံပါပဲ
လူတွေများ နားမလယ်နိုင်ဘူး အမှိုက်ပုံးရှိပါရက်နဲ့တောင်
ပန်းခြုံ လုပ်ထားတဲ့ အပင်တွေကြားထဲမှာလဲ ရေသန့်ဗူးအလွတ်တွေ ပစ်ထားတတ်တာပဲလေ
ကျုပ်တို့လို အဲ ခပ်မြင့်မြင့် ပြောရရင် ““ရီဆိုက်ကယ်””သမားတွေမှာ
ဒီလူတွေပစ်ထားသမျှ ကိုယ်အတွက်ဝမ်းဝစေမယ့် အရာတွေဖြစ်ပေမယ်
အဲလိုအလှအပဖျက်စီးတာမျိုးတော့ မကြိုက်ပေါင် စည်းကမ်းတကျ အမှိုက်ပုံးမှာစွန့်ပစ်ကြရင် မြို့တော်ကြီးလဲလှ
ကျုပ်တို့လို ““ရီဆိုက်ကယ်””သမားတွေအတွက်လဲဟန်ကျတာပေါ့ ဟုတ်တယ်လေ တစ်နေရာထဲမှာစုကောက်လိုက်ရုံပဲ
ကျုပ်တို့ ကောက်လို့ရသမျှ ရေသန်ဘူး အချိုရေဗူးမျိုးစုံကို ဒိုင်ခံဝယ်တဲ့ ဆိုင်တွေမှာ ကောက်လို့ရသမျှသွားသွင်း
ဒီလူတွေကလဲ ရေသန့်တစ်ဗူးဘယ်ဈေး ဘီယာသံဗူးတစ်ဗူး ဘယ်ဈေးဆိုပြီး သူ့ဈေးနဲ့သူရှိတာပေါ့ တစ်နေ့တစ်နေ့
အနည်းလေး ငါးထောင်ခြောက်ထောင်တော့ ပြေးမလွတ်ရပါတယ်..။။။
တစ်ခါတစ်လေ လူတွေကစည်းကမ်းမရှိလို့ စိတ်ညစ်ရတာပဲရှိတယ် လူတွေများ ဘယ်လောက်စည်းကမ်းမရှိလဲဆို
ရေသန့်ဗူးလွတ်ထဲ ကွမ်းသွေးထွေးထည့်ပြီး လွှင့်ပစ်လားပစ်ရဲ့ တစ်ချို့ဆို ရှုးရှုးတွေတောင်ပေါက်ထည့်တတ်သေး
ပြီးတော့တွေ့ကရာလွှင့်ပစ် မတော်ကားနင်းမိရင် ဒီဗူးးတွေကွဲထွက်ပြီး ပါတ်ဝန်းကျင် ပြန်ကျဲကုန်တတ်တာဗျ
ဒါမျိုးကျတော့ ကျုပ်တို့ “ရီဆိုက်ကယ်”သမားတွေလဲ မကောက်ချင်ဘူးလေ မတတ်သာလို့ ကိုယ်ဝမ်းစာအတွက်
ကောက်နေရပေမယ့် ဒီလိုလုပ်သွားတဲ့သူကိုမေတ္တာပို့တော့တာပဲလေ မေတ္တာပို့တယ်ဆိုလို့အကောင်းမထင်နဲ့ဗျ
ကျိမ်ဆဲတာကိုပြောတာပါ ကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေကတော့ မကောက်ဘူးဗျ သူက အရည်ပြန်ကျိုရင်
ပလပ်စတစ်လိုမဖြစ်ဘူးတဲ့ လိုရာပုံသွင်းလို့မကောင်းဘူးပြောကြတာပဲ ကျုပ်တော့ ကျုပ်တို့လဲ ကောက်မရ
ပြန်သုံးလို့လဲမရတဲ့ ဒီကျွတ်ကျွတ်အိတ်တွေတော့ မကြိုက်ပေါင် အမှိုက်ကရှုပ်သေး လေတိုက်ရင်လဲ ပလူကိုပျံနေတာပဲ
ဟိုတစ်ခါကတော့ ဂျာနယ် ဖတ်တဲ့လူတွေပြောနေတာကြားမိတာတော့ ဒီအိတ်တွေက နှစ်တစ်ထောင်ကြာတာတောင်မဆွေး
ဘူးတဲ့ဗျ ဒီလိုဆိုဖြင့်ခက်မှာ အခုပဲကြည့်လေ ကျုပ်နေတဲ့ အိမ်ဘေးကမြောင်းမှာ ဒီအိတ်တွေပိတ်နေလိုက်တာများ
ရေတောင်မဆင်းနိုင်ဘူး မြောင်မပိတ်အောင် ရေတက်တိုင်း ၀ါးလုံးနဲ့ထိုးထိုးချနေရတာအလုပ်တစ်ခု
ဒီလိုမှမလုပ်ရင် ကျုပ်အိမ်လေးရေမြုပ်မှာဗျ ကျုပ်ကကျူးကျော်တဲလေးနဲ့ ရေမြောင်းဘေးနေတာကိုယ်းဗျ
လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေ ထုပ်ပြီးမကွဲအောင် ထည့်တဲ့ ဖော့တုံးကြီးတွေက ပိုဆိုးသေးတယ်
ဒါကြီးတွေ မြောင်းထဲမျှောလာတိုင်း ဆယ်ဆယ်ပြီး သင်္ဘောလုပ်ကစားတဲ့ အငယ်ကောင် ကျုပ်သားရယ်
သူပြောတာတော့ ဒါကြီးတွေက သူဌေးတွေအိမ်မှာ တီဗွီတွေ ကက်ဆက်တွေဝယ်ရင် ပါတာတဲ့
အဲဒီဖော့တုံးကြီးတွေများ မြောင်းပိတ်နေလို့ကတော့ ပြီးရောပဲ
တစ်ချို့ဖော့တုံးတွေများအကြီးကြီးတွေ ဖဲ့မရချိုးမရ ရေထဲဘောလောပေါ်လို့
ဒီကောင်ကြီးတွေလဲ မဆွေးဘူးထင်တာပဲ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဗျာ ဖော့တုံးကြီးတွေ သုံးမယ့်အစား
စက္ကူအပွလေး သုံးရင်တောင် ကျုပ်တို့ “ရီဆိုက်ကယ်”သမားတွေဟန်ကျအုံးမယ်
အခုဟာက သုံးပြီးပြန်ရောင်းမရ အမှိုက်ပွ တာအဖတ်တင်တယ် ဆွေးပြီးပျောက်သွားရင် တော်သေးရဲ့
နောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်ဗျ အိမ်တွေမှာထွန်းတဲ့မီးချောင်းတွေ အဲဒါတွေလဲ ရေထဲမျောရင်မျောလိုက်ကြတာ
ကျုပ်တို့ကတော့အရင်က မီးချောင်းထိပ်နှစ်ဖက်က ဒန်ခေါင်းလေးတွေချွတ်ရောင်းဘူးပါတယ်
အဲဒီမီးချောင်းတွေကွဲရင် ဘာဓါတ်ငွေ့ဆိုလား ထွက်တယ်တဲ့ အိုဇုန်းပေါက်တတ်တယ်ပြောတာပဲ
သူဟာသူပေါက်တာတော့ မသိဘူးလေ ကျုပ်တို့ကလေးတွေဆော့တဲ့နေရာမှာ ကွဲမှ ခြေဖ၀ါးတွေစူးကုန်လို့
နောက်တစ်ခုက ဟိုဒံပေါက်ဖော့ဗူးတွေ ဒါတွေလဲစားပြီးလူတွေက အမှိုက်ပံုးထဲပစ်ထည်ရင်ထည့် မထည့်ရင်
ဒီတိုင်းလမ်းပေါ်ပစ်လိုက်ကြတာပဲလေ ဒါတွေလဲ သုံးမရဘူးဗျ ကျုပ်တို့မှာအဲဒါအတွက် “ရီဆိုက်ကယ်”ဈေးကွက်
မရှိဘူးလေ ..။။ဘာတွေပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ ကျုပ်တို့ဆီကလူတွေ ပြန်သုံးလို့ရတဲ့ပစ္စည်းနဲ့
သုံးလို့မရတဲ့ပစ္စည်းခွဲခြားပြီး စွန့်ပစ်ကြရင် ကျုပ်တို့လဲအဆင်ပြေ ကိုယ့်ပါတ်ဝန်းကျင်လဲသန့်ရှင်း
သူဟာနဲ့သူအဆင်ကိုပြေနေမှာ ဘာပဲပြောပြော သန့်သန့်ရှင်းရှင်ဆိုတော့ ကျုပ်တို့“ရီဆိုက်ကယ်”
သမားတွေလဲ စိတ်သန့်သန့် နဲ့ ကောက်လို့ရတာပေါ့ ညစ်ပတ်နေအောင်စွန့်ပစ်ထားရင် မေတ္တာပို့မိနေအုံးမှာဗျ
သွားမယ်ဗျာ နောက်တစ်ဆိုင်ကအမှိုက်ပုံး ရှာခြေ အုံးမယ်
ခင်ဗျာတို့လိုလူတွေကပြောမှ ပဲ ဒီအမှိုက်မကောင်းကြောင်းလူတွေသိမှာဗျ
ကျုပ်တို့ပြောလို့ကတော့ အမှိုက်ကောက်တဲ့ကောင်က အမှိုက်မကောင်းကြောင်းပြောတယ်ဆိုပြီး
ဟုတ်ကဲ့ဗျ .. သွားပါဗျာ.. အမှိုက်ကောင်းကောင်းရပါစေ… ( စတာ )
ကျနော့် အထင် ကျွတ်ကျွတ်အိပ်ထက် ကော်ဖီမစ်ထုပ်လေးတွေက ပိုဆိုးမလားလို့…
ဖေါ့ အစားထိုး စက္ကူ အပွ သုံးနိုင်မဲ့ အိုင်ဒီယာ လေးကိုတော့ နှစ်ချိုက်မိသဗျ…
တစ်နေ့ ငါးထောင်၊ ခြောက်ထောင်ဆိုတော့ အမှိုက်ကောက်တာ မဆိုးဘူးပဲ ဟင်းရွက်ရောင်းတဲ့သူ၊ ပန်ရံ လုပ်တဲ့သူထက်တော့ တွက်ခြေကိုက်မယ်ထင်တယ် ………
တနေ့ ငါးထောင် တလ တစ်သိန်းခွဲ၊ အရာရှိထက်တောင်သာသေး၊ ဘယ်သူ့တံတွေးကွက်မှာမှလဲ ပက်လက်မမျေားဘူးဗျ။ အလုပ် ပုံမှန် မရှိမှာတော့ ပူရသား။တော်ကြာ စည်ပင်က အမှိုက်သိမ်းလေလံပေးလိုက်မှာတောင်စိုးရိမ်ရသေးတယ်။
လည်ပင်းမှာ ကဒ်လေးတွေချိပ်ထားတဲ့သူတွေပဲကောက် တခြားသူတွေမကောက်ရ။
ကိုဘီလူးရေ ဘဝသမားတွေ နဲ့ အတူနေရတယ် လို့ ကိုး မပြောရဘူး
မျက်စိထဲ ကွက်ကွက်ကွင်းကွင်း မြင်အောင် ရေးတတ်လိုက်တာဗျာ
လာမယ် ကြာမယ် ရန်ကုန်မှာ အမှိုက်မီးရှို့တဲ့ Waste Incineration Plant
အဲဒီအမှိုက်ကနေ လျှပ်စစ်တောင် ထုတ်လိုက်ဦးမယ်
ပြောမယ့်သာပြောတာ ကိုဘီလူးရေ … အမှိုက်ကောက်တဲ့လူတွေက အတော်ခိုင်တာနော် …တနေ့ .. တနေ့ … … လေးငါးထောင်တော့ပြေးမလွတ်ဘူး … ။ သူတို့ထက်ပိုခိုင်တာကတော့ တဆင့်ပြန်ဝယ်တဲ့လူတွေပေါ့ … ။ အမှိုက်တဆင့်ဝယ်တဲ့လူက … မြေညီထပ်တိုက်ခန်းငှားလိုက်တာ နှစ်သိန်းနဲ့တဲ့ …. ဒါတောင် ခြောက်လမချုပ်ဘူး … တနှစ်ချုပ်တာဆိုပဲ … ။ …. ကိုယ်တွေသာ ဟိုမရောက်ဒီမရောက်နဲ့ … ဖြစ်နေတာက ဖွတ် …
အမှိုက်ကောက်တဲ့ လူတွေထက် ဝယ်တဲ့သူတွေက ပိုခိုင်တယ်ဆိုတာ အမှန်ပဲ etoneရေ
နွယ်ပင်တို့ အိမ်အောက်ထပ်မှာ အဲလို အမှိုက်ကနေ သဌေးဖြစ်နေတဲ့ သူရှိတယ် အရင်က သူတို့က အိမ်ရောဆိုင်ရော ပေါင်းပြီး နွယ်ပင်တို့ အောက်ထပ်မှာ ဖွင့်တာလေ အခုတော့ စီးပွားဖြစ်လို့ နောက်ထပ်အိမ်ခန်းတောင်ဝယ်ပြီး အိမ်သားတွေကပြောင်းနေကြတယ် နောက် လမ်းထဲက ကြိုပွိုင့်တွေမှာလည်း ဝယ်ထားတာမနည်းဘူး အမှိုက်ကနေရွှေဖြစ်တယ်ဆိုတာ
ဒါမျိုးကိုပြောတာ ဖြစ်မယ် ……………
ကိုဘီလူးကြီး ရေ အမှိုက် နဲ့ ပတ်သက်ရင် တော့ အားလုံး တဆင့် စကား တဆင့် နားနဲ့ အသိပေး လို့ ကလေးတွေ က အစ မသိနားမလည် သူ အဆုံး အမှိုက် ကို စည်း ကမ်း တကျလေး ပစ် ရင်း သန့်ရှင်း သပ်ရပ်တဲ့ သဘာဝ ပတ်ဝန်းကျင် ကို ချီတက်ချင်တာပဲ။
go green နဲ့ ပတ်သက်လို့ ဆွေးနွေးစေချင် တာဗျ။နားလည်သူတွေ ဆွေးနွေးကြဗျာ။
ကြွပ်အိပ်က မဆွေးမြေ့ နိုင်တာ၊ ဘက်ထရီ ထဲက ခဲက ခဲဆိပ် သင့် တာ တို့၊ နောက် မီးကြောင်းထဲက ငွေ့ က အိုဇုံး လွှာ ပေါက်တာရော၊ ပြဒါး ပါလို့ ပြဒါး သွေးထဲ ရောက် ရင် ဦးဏှောက် ထဲ ထိ ရောက်နိုင်တာ
စတာ စတာ တွေ ပေါ့ ဗျာ။
ဘီလူးကြီး ရေ ဖတ်သွားတယ် ဗျို့။ မိုက်တယ်ဗျ။
လက်နက်က အမှိုက်ထိုးဖို့ သံချွန်တတ်ထားတဲ့
တုတ်ပေမဲ့ Special Weapon တဲ့။
မနက်တော်တော်စောရင် ရတဲ့ အိမ်ကို ခြံထဲအထိဝင်တာ။
ကျမတို့ အိမ် ခြံတံခါးမြှင့်မထားခင်က ပလတ်စတစ်ခုံ၊ ပုဆိုး၊ ဓာတ်ဆီပုံး
ကိုဘီလူးရေ ကောင်းလိုက်တဲ့ရေးချက်ဗျာ ….။
မြန်မာပြည်ကြီး မြန်မြန်ချမ်းသာပါစေပဲ ဆုတောင်းတတ်တယ်ဗျာ…
ဘ၀သရုပ်ဖော်ဆရာကြီး ကိုဘီလူးရေ့ အရေးအသားကောင်းချက်ကဗျာ
ဒါနဲ့ ကိုဘီလူးခင်ဗျားခင်လို့ တစ်ခုလောက်မေးစမ်းပါရစေနော်
ကိုဘီလူးက သားစားဘီလူးလား ပန်းစားဘီလူးလားခင်ဗျား…………
မီး..ပန်းကြောက်တယ် .. ;)
ရီဆိုက်ကယ်နဲ့ပတ်သတ်ပြီး ဆရာမဂျူးတို့ ဆရာ အော်ပီကျယ်တို့ လောက်ပဲ စာရေး ကာတွန်းဆွဲလုပ်နေတာမြင်ရတယ်၊ ကျန်တဲ့လူတွေ သိပ်စိတ်မ၀င်စားကြသလိုဘဲ။ green environment လို့အော်နေတဲ့လူတွေတောင် recycle အကြောင်းသိပ်မပြောကြဘူး။ တကယ်ဆို ကျမတို့နိုင်ငံလို ပုံစံမျိုးက green environment ကိုကျော်ပြီးစဉ်းစားနေမဲ့အစား အမှိုက်သိမ်း၊စွန့်ပစ်စနစ်နဲ့ recycle အလေးထားပြီးအရင်လုပ်သင့်တာ။ ကိုဘီလူးရဲ့ အိုင်ဒီယာကို လေးစားသဘောကျပါတယ်။
ပန်းစားတာ သက်သတ်လွတ်တယ် လေ
ပေါက်ဆီ တို့ ၊ ပလာတာ တို့ စားရင်လည်း သက်သတ်လွတ်လားဗျ
အမှိုက်က ရွှေထွက်တယ်ဆိုမျိုးလိုပေါ့……….။ ဟုတ်မဟုတ်တော့ မသိဘူးဗျ ငယ်ငယ်က ကြားဖူးတာ ပုဇွန်တောင် အမှိုက်ပုံကို နံဂျားက လာဝယ်ဆိုဗျ….။ ကျုပ်တို့ ဆီမလဲ မနက်မိုးမလင်းကတည်း က အုပ်စုဖွဲ့ ကျနေကုန်တာ………..။ အရွယ်စုံ ဆိုက်စုံပဲ…။
မန်းလေးမှာ ရီဆိုက်ကယ် က ရပ်ကွက်ကြီးတစ်ခုလုံးရီဆိုက်ကယ်လုပ်တာ ရှေးကတည်းက။